Carl Bildt oo baarlamaanka hortiisa uga hadlay siyaasadda dibedda - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Wasiirka Arrimaha Dibedda Carl Bildt. Sawirle: Leif R Jansson/TT.
Carl Bildt oo baarlamaanka hortiisa uga hadlay siyaasadda dibedda
"Madaxweyne Janukovytj waa gacan ku dhiigle"
La daabacay onsdag 19 februari 2014 kl 15.00
Wasiirka arrimaha dibadda ee Iswiidhen ayaa maanta baarlamaanka hortagey oo ka hadley siyaasadda arrimaha dibadda ee dalka Iswiidhen. Arrimaha uu Carl Bildt ku soo qaatey qudbadda uu ka jeediyey baarlamaanka waxey badanaa ku saabsaneyd wada-shaqaynta ururka Midowga Yurub. Baarlamaanka Yurub ayaa doorasho loo gali doonaa bisha Mey ee sannadkan. Wasiirka arrimaha dibadda inta uusan aqrin qudbaddiisa waxuu ku bilaabey in uu hadal ka yiraahdo arrimaha ka sii daraya ee taagan dalka Ukrain.
- Maanta Yurub waa u maalin madow. Waddooyinka magaala-madaxyadeena maanta dad ayaa lagu dilayaa ayuu yeri Carl Bildt oo ka hadalyey rabshadaha ka socda dalka Ukrain.
Carl Bildt ayaa sheegey in uu jirey dadaal lagu doonayey in lagu kordhiyo wada-shaqaynta EU iyo Ukrain balse dowladda dalkaas - kadib caadaadis uga yimid dalka Ruushka ay go’aansatey in ay ka leexato dhabbihii wada-shaqaynta ee horey layskugu afgartey. Waxuuna wasiirka arrimaha dibaddu ka hadley mudahaaradyada ka dhacaya dalkaas oo imminka dowladda dalkas si waxuushnimo ah uga hortagtey.
- Maanta madaxweyne Janukovytj waa gacan ku dhiigle. Waxaana cabsi ka qabaa in waddada uu doortey ay keento dhiig badan oo daada iyo rabshadda oo faraha ka sii baxda. Waxuuna ka mid ahaa dadka ka hortagi karey in aysan arrintu sidaan noqon haddi uu gacan furan ku soo dhaweyn lahaa wada-shaqayn dhexmarta dowladdiisa iyo mucaaradka demoqraadiga ah. Balse waxuu doorbidey gacan ka hadal iyo in uu dadkana dhigaya mudaharaadka nabadda ah rasaas ku dilo, ayuu yeri Carl Bildt.
Waxuuna ka sii digey in uu dalkaasi sii galo maalmo kale oo madow. Inkastoo uu sheegey in uu ku kalsoon yahay in dadka Ukrain ay isaga wareejin doonaan raggaan dilaaga ah qaab demokaraatiyad ku dhisan.
Intaas ka bacdii wasiirka arriamaha dibadda Carl Bildt waxuu gudo galey qodbaddiisa ku saabsanayd siyaasada arrimaha dibadda ee Iswiidhen oo uu inta badan kaga hadley wada-shaqaynta ka dhaxeysa xubnaha ka midka ah ururka EU. Bisha maj ayaa muwaadiniinta EU u dareeri doonaan doorasho loo galayo baarlamaanka Mídowga Yurub oo Iswiidhen laga dooran doono 20 xil-dhibaan oo xisbiyada dalkan ku matali doona baarlamaanka Yurub. Carl Bildt ayaa digniin u jeediyey dadka ka soo horjeeda wada-shaqaynta Midowga Yurub.
- Kuwa Iswiidhen iyo Yuruba doonaya in ay burburiyaan oo daciifiyaan wada-shaqaynta EU waxaan u direynaa farriin cad: mas’uuliyadda taariikheed ee ay keento burburintiina wada-shaqaynta EU waxay noqon doonta wax culeys badan oo aydaan qaadi kari doonin. Haddii aad daciifisiin wada-shaqaynta Yurub markaas waxaad daciifiseen fursadaha lagu heli karo nolal-wanaag iyo horumar, ayuu yiri Carl Bildt.
Yurub diidka iyo shisheeye naceybka waa labo wax oo gacanta is-haysta, waana waxa mideeya maangaabnimada, loona baahan yahey in looga hortago awood kalsooni leh, ayuu yeri Carl Bildt.
Iswiidhen waa in ay qayb firfircoon ka qaadato sidii Yurub ku ahaan lahayd mid mideysan oo furfuran. Dowladda Iswiidhen waxey rabtaa in ay aragto suuqa u dhaxeeya Yurub oo ahaada mid si wanagsan u shaqeynaya ayuu raaciyey wasiirka arrimaha dibadda. Carl Bildt ayaa sidoo kale sheegey in dolwaddiisu dooneyso in la ballaariyo Midowga Yurub, asaga oo tusaale u soo qaatay dalka Turkiga.
- U soo dhawaanshaha Yurub waa awood ugu weyn oo gadaal ka riixeysa dib u habaynta ka socota dalka Turkiga. Waxaa la furay baal cusub oo ku saabsan wada-xaajoodka Turkigu ugu jiro ka mid noqoshada EU. Sidoo kale Turki waxay qaadey tallaabooyin suuqa xortaha lagu adkeynayo. Waxaa weli loo baahan yahay tillaabooyinka lagu adkeynayo xaquuul insaanka iyo madaxbannaanida garsoorka. Dhabbaha taa loo maryaana waa hirgelinta dastuur cusub oo dalkaas yeesho iyo weliba ka miro-dhallinta wada-xaajoodka nabadda ee lagula jiro Kurdida, ayuu yiri Carl Bildt.
Carl Bildt oo hadalkiisa sii watey ayaa ku soo qaatey dagaalka ka holcaya dalka Suuriya oo uu ku baaqey in sida ugu dhaqsiyaha badan loo joojiyo loona gaaro xal siyaasdeed oo dadka oo dhammi ka dhex muuqdaan. Waxuu sheegey in Iswiidhen ugu deeqdey dalkas 700 oo milyan oo karoon arrimaha bini’aadanimada, isla sannadkan gudahiisana ay Iswiidhen ku deeqi doonto 230 milyan oo karoon oo wax looga qabanayo arrimaha bini’aadanimada.
Waxyaalah cusub ee Carl Bildt ku soo qaatey qudbaddiisa waxaa ka mid ahaa in xukumadda uu ka mid yahay ay siisey dhaqaalo taageero hay’adda QM ee u qaabbilsan Nukliyeerka ee IAEA si ay u meelmariso heshiiska nukliyeerka ee lala galay dalka Iran. Iswiidhen oo codka ugu culus ku leh rabitaanka in arrintaan lagu dhammeeyo farsamo diblomaasiyadeed, ayuu yeri Carl Bildt.
Waxuu sidoo kale sheegey in Iswiidhen ay u tartameyso ka mid noqoshada golaha amniga ee QaramadaMidoobey sannadka 2017-2018, waxuuna sheegey in tartanka arrintaas Iswiidhen ugu jirto ay meel fiican mareyso.
- Tartankeena waxuu taagero ka haystaa waddamada waqooyiga Yurub. Waana mid ku dhisan khibradeenna, firfircoonideenna , deeqsinimadeenna iyo weliba in aan nahay dal mabda’ leh. Iswiidhen waa dalka toddobaad ee siiya dhaqaale nidaamka Qaramada Midoobey. Waxaan QM nooga soo shaqeeyey 80000 oo ruux, waxaan nahay dal saddexaad ee bixiya gargaarka bini-aadanimo. CV:geena QM waa mid adag, marka tartankeenna ma ahan mid ku dhisan cod xod-xodosho, ayuu yeri Carl Bildt.